अच्युत कंडेल : दिमाग १ - ० म
आज जेठ ६ गते, मंगलवार।
आउँदो बिहिवार नतिजा आउने सम्भावना ज्यादै धेरै छ रे। भन्नाले अबको हप्ता इन्टरनेटमा नतिजा पक्कै भेटिन्छ। जेठको सुरुवाती हप्ता। गर्मी उकालो चढ्दै छ। उकालो चढ्दा गर्मीलाई पनि गर्मी हुँदो हो, बेला बखत चौतारीमा बिसाउँछ। सुईय सुस्केरा हाल्दै फेरि उक्लिन्छ। बाहिर कोरोनाकाे लकडाउन छ। सन्नाटा बीचै कोलाहल सुरु हुन लागिसकेको छ। दिनभर गुँडमा बसेका मान्छे तितरबितर हुन लागिसकेका छन्। मेरो मुटु भने दिनभर स्थिर नै दौडिरहेको थियो। अब भने अस्थिरता च्याप्प समातेर दौडिँदै छ। Supraventricular Tachycardia हुन्छ कि Atrial Fibrillation हुन्छ कि Sinus Tachycardia मै चित्त बुझाएर बस्ने हो मेरो Cardiovascular System; सम्झँदै आङ सिरिङ्ग बनाएर आउँछ। चितवनको यस्तो गर्मीमा पनि काँडा उम्रिन्छन्। अरूलाई त के घोच्दथे, आफूलाई भने छियाछिया बनाइसके।
दिमागमा अनेकन कुराहरू खेल्न थालिसके। हिजोसम्म आफूलाई मात्र पालिरहेको दिमागले अब घर, परिवार, इष्टमित्र, समाज सबैलाई पाल्न लागिसक्यो।
"सोचेजस्तो नतिजा आउने हो कि होइन?" दिमागले प्रश्न खेलाउँछ।
"जस्तो गरेको छ उस्तै आउँछ नि।" उही दिमाग नै बोलिदिन्छ।
"जस्तो गरेको उस्तै आउने भनेर कहाँ हुन्छ! जस्तो गरे पनि नतिजा राम्रै आउनुपर्छ।" म पिन्चे स्वरमा बोल्छु।
"नतिजा जस्तो आएपनि स्वीकार्नु पर्छ, हेर केटा।" दिमागले नै थमथमाउँछ।
"स्वीकार्न त म स्वीकारौंला! मलाई हार पनि स्वीकार छ, जीत पनि स्वीकार छ। तर हाम्रो परिपाटी नतिजा केन्द्रित छ नि त। राम्रो भए त सबैको वाही-वाही पाइएला। नतिजाले ठग्यो भने - घरलाई कसरी मुख देखाउने। रमाइरहेका साथीलाई कसरी बधाई भन्ने।" म मनमनै बोल्छु।
"धत्, यस्तो पनि सोच्ने हो। वर्तमानमा पो बाँच्नुपर्छ। नाच्नुपर्छ। तैपनि नतिजा भनेको २ दिनलाई त हो। एकदिन घरपरिवारलाई। अर्को दिन साथीभाइलाई। जिन्दगी पो सधैंभरिलाई हो नि। त्यही २ दिनको लागि किन आफूभन्दा ठूलो भार बोकाउँछस् र मलाई।" दिमाग जुहारी खेल्छ।
"सुन सुन केटा, पर + इच्छा = परीक्षा भएको भन्छन्। अरूको इच्छामा आफ्नो खुशी दाईं नगराएस् ल। जे पर्छ त्यही टर्छ। परिवर्तन गर्न नसकिने कुरामा पिरलो गर्नुहुन्न भन्ने तेरै आदर्श हो क्यारे।" उही दिमागले थपिदिन्छ।
"हवस् हजुर हवस्।" मेरो उत्तर।
"ल, शुभकामना छ - जस्तो आउँछ त्यस्तै स्वीकार्न सक्ने, सन्तुष्ट हुन सक्ने शक्ति मिलोस्।" दिमागले बिट मार्छ।
दिमाग १ - ० म।
👨 अच्युत कंडेल 📆 19 May